यी हुन् बलिउडका सबैभन्दा महंगा सात आइटम गर्ल, कस्को मूल्य कति ? | Rajmarga
आइटम सङ्गस बलिउड चलचित्रलाई हिट गराउने फर्मूला हो । करिना कपुरदेखि दीपिका पादुकोणजस्ता हिरोइन पनि आइटम गर्ल बन्दछन् । यहाँ बलिउडका सात सबैभन्दा महंगा आइटम गर्लका बारेमा उल्लेख गरिँदैछ । कस्ले कति लिने गरेका छन् त ? उनीहरुले लिने गरेको तल उल्लेखित रकम भारतीय मुद्रा हो ।
सनी लियोनः ४ करोडदेखि ५ करोड
आइटम सङ्गसमा सनी लियोनको सबैभन्दा बढी माग छ । उनले शाहरुख खानजस्ता सुपरस्टारको चलचित्र ‘रईस’ मा पनि आइटम सङ्गस गरिसकेकी छन् । उनले एउटा आइटम सङ्गसका लागि ४ देखि ५ करोड भारतीय मुद्रासम्म लिने गरेकी छन् । सनी लियोनमा फिल्माइएका आइटम सङ्गस निकै चर्चितसमेत हुने गरेका छन् ।
प्रियंका चोपडाः ३ देखि ४ करोड
प्रियंका चोपडाले ‘राम जाने’जस्ता चर्चित आइटम सङ्गस गरिसकेकी छन् । उनी एउटा सङ्गसका लागि ३ देखि ४ करोड भारतीय रुपैयाँसम्म लिने गर्दछिन् । अर्को कुरा उनी ए ग्रेडको चलचित्रका आइटम सङ्गस मात्रै गर्न रुचाउँछिन्।
कैटरिना कैफः ३ करोड रुपैयाँ
कैटरिना कैफले चिकनी चमेली र शीलाकी जवानीजस्ता आइटम सङ्गस गरिसकेकी छन् । उनी एउटा आइटम सङ्गसका लागि करिब ३ करोड भारतीय रुपैयाँसम्म लिने गर्दछिन् । उनी सम्बन्धका आधारमा मात्र आइटम सङ्गस गर्ने गर्दछिन् ।
दीपिका पादुकोणः ३ करोड
कैटरिनाले जस्तै दीपिका पादुकोणले पनि आफ्ना मित्र निर्माता निर्देशक वा हिरोका लागि मात्रै आइटम सङ्गस गर्ने गर्दछिन् । उनले एउटा आइटम सङ्गसका लागि ३ करोड भारतीय रुपैयाँ लिने गरेकी छन्।
जैकलिन फर्नान्डिजः २ करोड रुपैयाँ
बागी २ मा जैकलिन फर्नान्डिजले ‘एक दो तीन’ आइटम सङ्गस गरेकी थिइन् जुन खासै मन पराइएन । उनी एउटा आइटम सङ्गसका लागि दुई करोड भारतीय रुपैयाँ लिने गर्दछिन् ।
मलाइका अरोरा अब आइटम सङ्गसमा रुची लिन छाडेकी छन् । त्यसो त उनको मूल्य एउटा आइटम सङ्गसका लागि २ करोड भारतीय रुपैयाँ हो ।
उर्वशी रौटेलाः ५० लाख रुपैयाँ
उर्वशी रौटेलामाथि फिल्माइएको आइटम सङ्गस ‘सारा जमाना’ निकै हिट रह्यो । उर्वशीले एउटा सङ्गसका लागि ५० लाख भारतीय रुपैयाँ लिने गरेकी छन् । एजेन्सी
Previous post: नीति तथा कार्यक्रममाथि ६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता
Next post: शुरु भएन यार्सागुम्बाको कृत्रिम उत्पादन, किन रोकियो उत्पादन
मानब कालुङ मगरको ‘बटौलीको बजार’ (भिडियो)
यूटुबमा आयो नन्दिताको पछिल्लो फिल्म ‘अमेरीकन बाबु मेड इन नेपाल’
अनुश्का भईन् मिस नेपाल २०१९